jeudi, 01 décembre 2016 16:46
A&C Palace: Saika raikitra ny sakoroka
Omaly harivan'ny alarobia 30 novambra, raha nandray manokana ireo Ben'ny Tananan'Ambohimahamasina sy Tale iray ao amin'ny ministeran'ny Ati-tany ny tompon'ny trano fandraisam-bahiny lehibe, izay nandraisana ireo vahiny tamin'ny frankofonia, dia raikitra ny horakoraka sy ny savorovoro. Hitan'ireto mpiasa manko fa dia nisy ny arozazy nataon'ireto mpivory, ary nisy mihitsy aza no nahatsikaritra fanomezam-bola 5 tapitrisa Ariary ho fisaorana tamin'ny fiarovana ny tompon-trano tamin'ilay raharaha nanenjehana azy teny amin'ny Bianco. Nahita izany ireto mpiasa marobe dia nanomboka nivazavaza hoe "Aloavy ny Karamanay", satria raha ny akom-baovao tokoa dia ny hoe tsy voaloan'ny tompon'ny A&C ny karaman'ny mpiasa nanamboatra ity trano lehibe raitra ity, fa dia ny andraso lava no ambetiteniny.
jeudi, 01 décembre 2016 15:51
Antanimena: Raikitra ny fitifirana mpangalatra, 1 maty, ny 1 naratra mafy
Tokony tamin'ny roa ora latsaka teo dia nifanenjehana avy any Behoririka ireto mpangalatra, ka sahabo teo Antanimena, no raikitra ny tifitra sy poa-basy. Lavo tsy tra-drano ny jiolahy iray, ilay namany kosa naratra mafy.Mbola tsy fantatra hatreto ny anton'ilay fifanenjehana fa ny vahoaka efa vory no betsaka.
jeudi, 01 décembre 2016 10:46
Tsipy kanety be: Ny mpanao gazety anjorom-bala hatrany
Hatramin'izao dia tsy misy ny karatra fidirana ho an'ny mpanao gazety na ny programa izay mety ho mahakasika izany. Fiafaninana eran-tany anefa ny resaka eto.
jeudi, 01 décembre 2016 09:26
Tahirin-tsary France 24
Paris-Frantsa : Kaonferansan’ny mpamatsy vola sy mampiasa vola
Tanterahina anio alakamisy 1 desambra sy rahampitso ao amin’ny foiben’ny UNESCO ao Paris, renivohitr’i Frantsa ny kaonferansan’ny mpamatsy vola sy mampiasa vola iandrandran’i Madagasikara famatsiam-bola hanatanterahana ny PDN na Paikady Natao Dina asan'ny fitondram-pajakanana.
mercredi, 30 novembre 2016 10:30
Vita Frankofonia: Mahazo aseho amin'izay ny tsikoko
Tondra-drano sahady ny eny amin'ny faritra iva, mahatsiaro mijaly ireo mponina.
Page 278 sur 394